janvier 2018 - Page 2 sur 75 -
Fiovaovan’ny toetr’andro : Tandindomin-doza ny seha-pihariana cacao
“Loza mitatao ny fiovaovan’ny toetr’andro. Mihabetsaka loatra ny orana ary tsy ampy ilay tetikasa izay ahafahana mandefa ilay rano miangona. Tsy ampy koa ny fiarovana ny tontolo iainana manodidina ilay faritra misy cacao, toa ny …Tohiny
Fitsaram-bahoaka tany Fianarantsoa : Mpianatra maromaro nalaina am-bavany
Ao anatin’ny fanadihadiana tanteraka mahakasika ny famonoana ilay rangahy be tany Andrainjato Fianarantsoa ireo polisy any an-toerana amin’izao fotoana izao. Raha ny fampitam-baovao avy amin’ny tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny kaomisaria ao Fianarantsoa, dia natomboka tamin’ireo …Tohiny
Antsiranana : Mpianatra roa maty nilatsaham-potaka
Tao anatin’ny roa andro monja, dia nahatratra dimy ireo olona maty nilatsaham-potaka ka ankizy avokoa ny telo tamin’izy ireo. Omaly tolakandro tokony tamin’ny 01 ora sy sasany, dia zazalahy 15 taona no namoy ny ainy …Tohiny
Maevatanàna : Vato “Agathe” 150 kg tra-tehaka tanaty taksiborosy
Harena an-kibon’ny tany enina gony, milanja 150 kilao no tra-tehaka tany anaty taksiborosy Sprinter iray mampitohy an’i Marovoay sy Antananarivo ny alatsinainy lasa teo, tokony ho tamin’ny 11 ora sy sasany alina. Araka ny voalaza, …Tohiny